Ọbọgwụ kechie rawhide stick - Goodao Technology Co., Ltd.
nwamba snacks/ cat ọgwụgwọ
Ọbọgwụ kechie rawhide stick
Duck wrap rawhide stick bụ maka nkịta ga -ata ikikere ezé ya ma na -enyekwa aka iku ume ọjọọ. Anyị na -ahọrọ akpụkpọ anụ ala iji nọgide na -adịte aka na isi anụ ala. Anyị na -eji naanị iji akwụkwọ eme ihe ka idobe udidi anụ ahụ.
Ezi nri nri na -abawanye uru mgbe niile, ngwaahịa anyị nwekwara ike inye aka n'ịme mgbịrịgba dị ala, na -ebelata owu ọmụma ma na -enye nkịta gị mara mma nri.
Ọnụ ọgụgụ nri (iberi/ụbọchị)
Karịrị ọnwa 10
Ntị: Iji zere ihe ize ndụ nke ilo. Ejila ngwaahịa a mgbe anụ ụlọ gị na -ama jijiji ma ọ bụ mgbe mgbatị ahụ siri ike gasịrị.
Nyocha ihe mejupụtara:
Abụba Crube: 2.5% max
Fiber Crube: 1% kacha
Ntụ: 3.5% max
Mmiri: 18% max
Aha ngwaahịa Ọbọgwụ kechie rawhide stick
Nkọwa ngwaahịa 100g kwa akpa akpa (nabata nhazi)
Adabara Ụdị nkịta niile dị ihe karịrị ọnwa atọ
Ndụ shelf 18 ọnwa
Ngwaahịa bụ isi ihe Ọbọgwụ na Cowhide
Ụzọ nchekwa Zere ìhè anyanwụ kpọmkwem, ọkacha mma na ebe dị jụụ na ikuku
Site n'iji usoro nchịkwa ọkaibe zuru oke nke sayensị, ezigbo mma na ezigbo okpukperechi, anyị na -enweta aha ọma ma nwee ọzụzụ a maka obere oge maka China Rawhide gbasaa eriri nkịta na -ata nri, ịdị mma bụ ndụ ụlọ ọrụ, lekwasị anya n'ihe onye ahịa chọrọ. isi mmalite nlanarị na mmepe ụlọ ọrụ, Anyị na -agbaso ịkwụwa aka ọtọ na ezi okwukwe ịrụ ọrụ, na -atụ anya ọbịbịa gị!
Oge dị mkpirikpi maka ọnụ ahịa nkịta na -ata ata nkịta China na ọnụahịa ọkpụkpụ, anyị na -anabata ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile ka ha bịa kparịta ahịa. Anyị na -enye ngwọta dị elu, ọnụ ahịa ezi uche yana ezigbo ọrụ. Anyị na -atụ anya iwulite mmekọrịta azụmaahịa na ndị ahịa si n'ụlọ na mba ofesi, na -agbakọ mbọ maka echi mara mma.
Nke gara aga: Ahịhịa ọbọgwụ kpọrọ nkụ
Osote: Ọkụ Duck Cube
Duck Kechie Rawhide Stick
Mkpanaka anụ ezi
Pressed ọkpụkpụ 10 cm na apịtị ọkụkọ
Mpekere ọkụkọ na beef